Mahatsiaro Ny Doro Tanàna Goavana Tao Smyrna, 93 Taona Lasa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2015 3:23 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Română , عربي, English
Ny sambo USS Litchfield (DD-336) tao Smyrna tamin'ny 13 Septambra 1922 nanampy tamin'ny famindra-toerana ireo mpitsoa-ponenana niala ny fahamaizan'ny tanàna nanomboka nijoalajoala. Sary: International Newsreel [azon'ny rehetra ampiasaina], tao amin'ny Wikimedia Commons.
Indray andro, nisy tanàna manana ny tantarany tao amin'ny morontsiraka Azia Minora – Smyrna ilay tanàna lehibe , iray amin'ireo manankarena indrindra sy ahitana karazan'olon-drehetra ary tanàn-dehibe ahitana foko samihafa indrindra manerantany. Saingy tamin'ny 13 Septambra 1922, nandoro ireo faritra Armeniana sy Grika ao Smyrna ireo miaramila Tiorka mpandresy ary nahavita fanolanana, fandrobàna sy famonoana olona faobe.
Nitranga efatra andro taorian'ny fidiran'ny tafika Tiorka tao Izmir tamin'ny 9 Septambra 1922 ny Hai-tanàna Goavana, namarana tanteraka ny Ady Grika-Tiorka tamin'izany. Nandrava tanteraka ireo faritra Grika sy Armeniana tao an-tanàna ny afo taty aoriana, miaraka amin'ireo tantara samihafa mbola iadian-kevitra mikasika izay tompon'andraikitra marina tamin'ny fandoroana. Nifanisika tany amoron-dranomasina ireo mpitsoa-ponenana Grika sy ny Armeniana miezaka mandositra ny afo, raha namono azy ireo kosa ny tafika Tiorka sy ny tariny (milisy tsy ara-dalàna).
Nisy fiantraikany goavana teo amin'ny fanahy Grika ny Fandefasana Miaramila sy ny Voina tany Azia Minora, ary ny fanadiovam-poko teo amin'ny mponina Grika monina tao an'arivo taonany. Sokajiana ho voina ratsy indrindra teo amin'ny tantara maoderina Grika ny Loza tao Smyrna (teny Grika ampiasaina matetika hilazana ny fandripahana sy ny hai-trano, hai-tanàna), ary nampitsahatra ny fifandraisan'ny Grika-Tiorka ampolony taona vitsivitsy ny nanjò ny mpitsoa-ponenana. Ho an'ny Tiorka, fantatra amin'ny anarana hoe Kurtuluş Savaşı, Adim-Pahaleovantena izany.
Nisioka ity lahatsary malaza mampiseho ny afo ity ny Foibe Grika Fanangonam-Baovao ny Fandripahana, izay mikendry hanaitra ny saina tamin'ny fandringanana ny Grika tao amin'ny Fanjakana Ottoman tanelanelan'ny 1914-1923:
Fandresen'i Kemal faratampony : ny fandoroana an'i Smyrna (#Izmir) lasa lavenona
Nitatitra ny fotoana nitrangan'ny loza tamin'ny taona 1922 ny New York Times:
Notsongaina tao amin'ny NYT, 15 Sep 1922. Pikantsary avy amin'ny tahirin-kevitry ny New York Times archive
Nanamarika ny andro tao anatin'ny fitantarana manokana amin'ny teny Grika ny Loza tao Smyrna ny vavahadim-baovao sy fomba fiainana LiFO, tamin'ny namaritany ho nahatonga ” ny fifindra-monina goavana indrindra teo amin'ny tantaran'i Gresy.”
Mpitsoa-ponenana an'arivony no nandositra ho any Gresy, miezaka hanomboka fiainam-baovao ao anatin'ny fitsarana an-tendrony, fanevatevana ary fiainan-tsarotra, araka ny tatitra tamin'ny fijoroana vavolombelona manokana nataon'ny fianakavian'ny mpitsoa-ponenana.
Tonga tao Gresy ny reniko, ny raiko sy ny raibeko, voaroaka avy any Azia Minora. Navela tao anatin'ny faharerahana sy fahakiviana izy ireo. Nandao ny harenan'zy ireo, ny fananany rehetra. Vao avy nanambady ny reniko ary niaraka tamin'ny kitapo misy akanjo fotsiny. Noroahin'ireo olona rehetra [tao Gresy] izy ireo. Halan'izy ireo ry zareo ary nantsoin'izy ireo ho “tourkosporoi” [“taranaka Tiorka”, sokajiana ho fanevatevana]. Nihevitra ny olona fa hangalatra ny fananan'izy ireo ny [mpitsoa-ponenana]. Nomena toby kely antonona fianakaviana 80 ireo mpitsoa-ponenana. Mahantra-maloto. Saingy olona miasa mafy izy ireo, ka nanorim-ponenana tao avokoa. Olona tsara, Mendrika avokoa na iza na iza tonga avy any Azia Minora. Halan'ny olona izy ireo ao Gresy. Sivilizasion'i Gresy i Azia Minora, kanefa nohazain-dry zareo.
Ambony dia ambony ny hakitroky ‘ny mponina nandritra ny taona 1922-23 ary tsy araka ny tokony ho izy ny tompon'andraiki-panjakana. Avy eo nisy ny aretina tefoedra, kitrotro, tazo jaky (scarlatine), meningite, nendra, fivalanan-drà ary kôlerà. Niova endrika ny Piraeus sy Atena. Tamin'ny 15 Novambra, nanamarika ny gazety “Protevousa” [“Renivohitra”] hoe: “Tsy ampy rano ary tsy misy ny fandroana ho an'ny vahoaka ao amin'ireo kaominina roa efa tsy zatra fahadiovana sy fidiovana. Naorina teo an-tampon'ny maloto mihoatra ny lavaka ireo tanàna roa. Mikoriana eny an-dalana ny rano maloto […] Tsy mbola sarotra kokoa toy izany sy taninonin-doza tahaka izany ny fahasalamana tao Atena. Nandany ny raboka, sy ny aretina hafa mahafaty. Inona no tokony hataontsika? […] “
Mpitsoa-ponenana Grika avy ao Azia Minora tamin'ny 1920 mipetraka ao amin'ny lalantsaran'ny trano fijerena sarimihetsika ao Atena. Misy fianakaviana isaky ny lavarangana .
Tonga hatrany amin'ireo firenena Afovoany-Atsinanana ny mpitsoa-ponenana avy ao Anatolia hamonjena ny ainy. Toa mitovy ny lalan'ny fifindra-monina nandritra ny taonjato maro, na inona na inona toerana alehan'izy ireo na atsinanana na andrefana.
Mpitsoa-ponenana Grika ao Aleppo, Syria. Sary: Tranombokin'ny Kongresy.
Manana fomba miavaka “fanadinoana” ny lasany i Gresy. Hita mazava tao anatin'ny taona maromaro lasa ny fitomboan'ny hetsika ankavanana hiringiriny sy ny fitondra-tena sy kabarim-pankahalana manavakavaka .
Hita hatraiza hatraiza toy ny soratsoratra amin'ny rindrina ao Atena sy tanàna hafa Grika ny teny filamatra manohitra ny fanavakavahana sy ny mpomba ny mpitsoa-ponenana :
“Mpitsoa-ponenana ny raibentsika [tamin'izany].
Mpifindra-monina ny ray aman-drenintsika [tamin'izany].
Mpanavakavam-bolo-koditra ve isika?”
Soratra amin'ny rindrina miparitaka manerana ny rindrin'i Atena.
Nandritra ny volana faramparany, manoloana ny krizin'ny mpitsoa-ponenana izay mahakasika indrindra ny nosy Grika ao amin'ny Ranomasina Egee Atsinanana, olona maro no niezaka nanasongadina amin'ireo olona mitaraina amin'ny firohotan'ny mpitsoa-ponenana mihazakazaka ao amin'ny seranan-tsambon'ny nosy sy ny arabe fa niaina ny toy izany ihany koa ny razamben'izy ireo.
Ry Grika, tsarovy…..[hoy ny vakin'ny soratra: Smyrna 1922, Syria 2015]
Nilaza tamiko ny renibeko avy ao Smyrna fa nitantana ny anadahiny nandritra ny telo alina izy tamin'ny taona 1922 mandrapahalavenona ny tanàna.